Irubber (yekugadzirisa macamp)
Iyo rubha inonyanya kushandiswa kugadzirisa mapaipi, hoses uye tambo.
Iyo Mini clamp ine iyo inogara yakasimba kuomesa simba yekuisa nyore nyore uye yakakodzera kudiki diki yakaonda-yemadziro hoses pamusoro isina screw pliers.
Huru duy pombi inosungira ne rabara
Yakakura duy pombi inosungira nerabara chinhu chakakosha clamp yekugadzirisa mapaipi akamiswa.
Wiri waya hose clamp
Double waya hose clamp inowanikwa mumidziyo miviri. Iyo waya diameter yakasiyana zvichienderana nehukuru hwayo. Saizi isina kunyorwa patafura inogona kuvezwa
Nzeve mbiri hose dzinodzivira
Makapeturu-nzeve matanho anonyanya kugadzirwa emhando yepamusoro-isina mushini simbi mashubhu, uye iyo pasi inobatwa neyemhando yepamusoro mhando zinc.Compact uye isina huwandu dhizaini inoda caliper gungano.
Bridge hose tswanda
Bridge hose machira akagadzirirwa zvakanyanya mabhero, mabhero anotenderera kuruboshwe uye kurudyi kugadzira iyo yakakwana kadhi chisimbiso pombi sag.Hose hose inogona zvakare kubatanidzwa kune guruva chivharo, kuputika-chiratidzo gonhi, chinongedzo uye zvimwe zvinhu kuti dzive yakasimba uye yakasimba guruva rekuunganidza system. Iyo bhurandi dhizaini inobvumira simba kuti riende yakananga mu hose, nyore kuisa panzvimbo yehose yekuchengetedza chisimbiso uye kubatana. Robust stainless simbi yekuvakira yakasimba.